Ezikhangayo Eyingqayizivele Ethiopia: isithombe kanye nencazelo
Izikhangibavakashi Ethiopia (amazwe emangalisayo East Afrika) ongamtshela okuningi ngaye. Kukhona ubuhle emangalisa bemvelo amapaki layo eliyingqayizivele, fancy usawoti amachibi, lasendulo amathempeli itshe futhi amatshe ayenzelwe. Kafushane, eziningi ezithakazelisayo, ongaqondakali futhi ofuna ukuphumela obala.
Kokubona uvumele ngijwayele zaleli zwe lezintaba, lapho isiko ezisemadolobheni yedolobha lanamuhla eyakhelene izizwe semi olubi, ubuKristu oluxube umphakathi lasekuqaleni.
Ethiopia - uthi Afrika ezimele, abangasizakalanga ngakho kube ikoloni. Inhlokodolobha itholakala e-Addis Ababa - idolobha ukuthi ukubaluleka kwalo ngokomlando, ezombusazwe nezamasiko isimangalo ukuba inhloko-dolobha lonke izwekazi. Kuyinto ecebile hhayi kuphela e izikhumbuzo zomlando kanye namasonto, kodwa labantu futhi multi-ethnic raznokonfessionalnym.
Isici yalesi isimo Afrika lokuthi omunye inkolo yabo enkulu wukuthola ubuKristu nesiko lako Eastern, kukhona Orthodox. Kodwa izwe amazing kakhulu abacebile ezivundile zemvelo namapaki, okuyizinto ezikhangayo eziyingqayizivele Ethiopia.
Symensky Intaba National Park
Omunye emangalisa yemvelo landscape liyalondolozwa injalo yasekuqaleni. Akhiwe Amhara esifundeni engxenyeni enyakatho ntshonalanga yezwe. It yasungulwa ngo-1969 ukuze alondoloze imvelo eziyingqayizivele Symenskih ezihosheni. Nangu Isiqongo esiphakeme yezwe - Ras Dashen.
On the nsimu enkulu akha amahektha kuka amabili, ukusakaza amatshe angajwayelekile, crests namazombezombe entabeni iphakama, amateyipu abamba ukusakazwa yetintsaba, okuholela isihambi ku emifantwini giant. Phelelisa zonke lokhu ubukhazikhazi utshani ugcwele emathafeni nezigodi. I okwakhe lokhu landscape ukuthi wadala phakathi neminyaka futhi kwaba umphumela ukuguguleka izinqubo, kancane kancane nokuguqula ezinkangala zaseEthiopia. Futhi, epaki Kuyathakazelisa ngoba kumuntu zezinyoni ezingavamile kakhulu izilwane nezinyoni ekhaya. ezikhangayo Abaningi Ethiopia sidalwe Imvelo uqobo lwayo.
Ukuze simazi kangcono kwepaki namathafa yinqaba, ungakwazi ukusebenzisa umhlahlandlela noma ukuhamba bebodwa ukuchitha. Lokhu lula emizileni enhle ukunikela ubuhle emangalisa zalezi zindawo.
Kodwa akulona ocebile kuphela amapaki zemvelo, ezweni elimangalisayo Ethiopia. Izikhangibavakashi, abalwe ngezansi isithombe, ivulekele izwe ngundlalifa ezikhumbuzo omkhulu lasendulo. Lezi avele amehlo bamangala zezivakashi Aksum Obelisk, emelela amandla yombuso wasendulo, elalisendaweni endaweni kusukela lesibili leminyaka kuya ekhulwini leshumi nanye.
Ngokwezazi-mlando, tshe kuyinto itshe lethuna, ekhombisa indawo yokuphumula yezikhulu zasebukhosini izinduna. Famous yalezi ezikhumbuzo babé sibonga lingakanani umxhwele. Isisindo Obelisk enkulu amathani engamakhulu ayisihlanu, ukuphakama - mayelana 33 amamitha.
Okuxakayo ukuthi la impahla okuyindawo senziwa, kulezi zindawo ayitholakali. Amaphethini, esehlanganise kobuso Itshe, okufana kakhulu indaba emfushane ka-skyscraper yesimanje.
Engeza Askumskim namatshe amade abaziwe imfihlakalo futhi yini hhayi ngakho kudala platform omkhulu, ehlanganisa i-basalt slabs watholakala ngaphansi. Kulesi sisekelo, ososayensi baye basikisela ukuthi tshe kumane nje kuyingxenye yomthwalo isakhiwo omkhulu, kufihlwe emathunjini omhlaba.
Kuyinto lokhu umzimba emangalisayo yamanzi emngceleni we ezimbili amazwe ase-Afrika, e-Ethiopia futhi Djibouti. endaweni yaso square metres abangaphezu kwamakhulu amathathu, futhi ezinye amaphuzu ukujula ifinyelela amamitha amane.
Kuyinto ephawulekayo ukuthi echibini lizungezwe yinqaba lime-usawoti amakholomu ezikhula lapha njengoba shallowing emanzini. Kwezinye izindawo ukuphakama izinsika esikhulu usawoti phezulu ngamamitha amahlanu.
Abbe owabangelwa iziphethu eziningana ezishisayo, ngakho amanzi njalo efudumele futhi landscape kubonakala ethereal futhi lokhu edonsela eziningi ezikhangayo Ethiopia, abantu abavela emhlabeni wonke. Kodwa ungakhathazeki ukuthi othile ungayeka ukujabulela lokhu kwenkundla emangalisayo, asikho isidingo, ngoba kulezi zindawo kukhona liftoff okungenani emhlabeni.
Ethiopia ezikhangayo eyethula ukuba uhlobo ocebile futhi izikhumbuzo yezwe lasendulo, has Indawo yayo siqu.
Church of St George itholakala edolobheni Lalibella, okuyinto lethiwa inkosi, owabusa kulezi zindawo ngo-BC XII leminyaka. Waba Lalibella odumile ukuthi wafuna ukudala emazweni Ethiopia, iJerusalema yesibili - umuzi wakhiwe amathempeli, eqoshwe emadwaleni. Ukwakhiwa eyathatha ecishe ibe ikhulu ikota.
Namuhla e Lalibelle ngasinda amasonto nanye, omunye enhle kakhulu ngayingcwelisa behlonipha St George.
isakhiwo sakhe, eliqoshwe ukuma esiphambanweni njalo ekujuleni ezibilinini yomhlaba engaphezu kwengu-20 amamitha. Ungathola ethempelini entunjeni yokuxhuma zonke emathempelini endawo ndawonye.
Ethiopia ezikhangayo, izithombe kanye nencazelo zazo enikezwa esihlokweni, futhi ugcizelele ukuthi ungubani eliyingqayizivele futhi engavamile engokwemvelo kuleli zwe emangalisayo Afrika.
IPhone 6 izinga sokudubula (iPhone 6): bangaki megapixels ikhamera?
Umuthi 'Befungin ". Izibuyekezo. imfundo